Trivia - Safarka Qoyska | Seymour, IN | Xarunta Booqashada Degmada Jackson
Socdaalkan wadista ah ee iskiis isu hagitaanku wuxuu ku ammaanayaa “beeraha nool” iyo dadka ka dhigaya mid ka mid ah hantida ugu muhiimsan ee gobolkeenna. Waxaad la kulmi doontaa wax walba laga bilaabo hawlgalka ugu casrisan ee beerashada ilaa beerta qoys ee yar ee quaint ee waagii hore. Waxaa jiri doona xoolo badan oo lagu fiirsado beeraha iyo deegaankooda dabiiciga ah. Qaar ka mid ah vistas-yada iyo darawalada ugu quruxda badan ayaa laga heli karaa qaybtan ka tirsan Degmada Jackson.
Safarka waxaa lagu dhammeyn karaa dhowr saacadood ama waxay qaadan kartaa ilaa nus maalin, iyadoo kuxiran danahaaga iyo inta aad rabto inaad booqato.
Halkan guji si aad u soo dejiso macluumaadka safarka wadista
Suuqa Beerta Stuckwish
4683 S. Wadada Gobolka 135, Vallonia
Beerta qoysku waxay taariikh dheer ku leedahay Degmada Jackson waxayna ku taal meel 7 mayl u jirta Brownstown oo ku taal Waddada Gobolka 135. Booqo suuqyadeena si aad ugu raaxaysato dhammaan wax soo saarka maxalliga ah ee cusub inta lagu jiro goosashada. Waxaan ku hanweynahay inaan siino miraha ugu fiican uguna fiican miiska qoyskaaga. Laga soo bilaabo wax soo saarka cusub ee maxaliga ah ee la beeray ilaa malabka maxaliga ah iyo saxmada, waanu kugu soo koobnay. Waxaan sidoo kale sidnaa farshaxanno maxalli ah iyo alaabada qurxinta guryaha ee bulshadayada. Istaag oo nala soo booqo oo ku raaxee waxa Jackson County, Indiana ku saabsan tahay.
Halkan guji si aad u booqato websaydhka!
Suuqa Beerta Qoyska Hackman
6077 S. Wadada Gobolka 135, Vallonia, 812-358-3377, Guga illaa Xagaaga.
Astaamaha qoyska ee ka shaqeeya suuqa beeraha, oo bixiya wax kasta oo qofku ka filan karo suuqa beeraha dhinaceeda. Galeyda, bocorka, yaanyada, digirta cagaaran, cantaloupe iyo xitaa malab dalka laga soo saaro ayaa laga heli karaa suuqa, kaas oo ay ka shaqeeyaan jiilasha reer Hackman iyo asxaabtiisa. Waxay ku taalaa inta udhaxeysa Vallonia iyo Salem, suuqa beeraha wuxuu kudhowaad 10 mayl u jiraa Brownstown laakiin waa u qalantaa wadista.
Suuqa Beerta Tiemeyer
3147 S. Wadada Wadada 300 W., Vallonia, 812-358-5618.
Si aad ah loogu yaqaan caanababnimada iyo sanadlaha xilliyada oo dhan, noocyo badan oo gour ah, bocor iyo squash iyo suuqa gudaha oo ay ku yaalliin miro, khudrad, nacnac, jellies iyo waxyaabo badan oo adag in alaab la helo. Makhaayad adeeg buuxa leh ayaa u adeegta martida waxayna siisaa quraac, qado, casho iyo xitaa biis! Suuqa wuxuu qof walba siiyaa wax, laga bilaabo fersken iyo squash xagaaga illaa zucchini, yaanyo, qaraha iyo bocor iyo gourds. Xitaa waxaa jira xero xayawaan yaryar iyo dabool yar oo golf ah. Geedaha Kirismaska ​​ee la jaray iyo ubaxyo cusub oo la bixiyo ciidaha.
Suuqa Beeraleyda Deegaanka Seymour
Walnut Street Parking Lot, Seymour, Maajo ilaa Oktoobar
Wax soo saarka iyo badeecadaha noocyadooda kala duwan ayaa lagu soo dhaweynayaa suuqa beeraleyda xilliyeed ee kuyaala bartamaha magaalada Seymour. “MarketLite” waxaa la qabtaa 2-da duhurnimo illaa 6-da dambe ee Isniinta iyo 8-da ilaa duhurkii Arbacada laga bilaabo Gu’ga illaa Deyrta iyo 8-da ilaa duhurkii Sabtida Oktoobar. Suuqa oo buuxa waxaa la qaban doonaa 8 am ilaa duhurkii, May ilaa September. Sabtida 3aad ee bil kasta, Juun ilaa Sebtember, waxay noqon doontaa suuqyo khaas ah Sabtiyada oo leh bannaanbaxyo karinta, waxqabadyada carruurta, muusig iyo waxyaabo kale.
Heritage Park, oo u dhow maxkamadda degmada, Juun ilaa Oktoobar
Soo-saar iyo alaab ayaa lagu soo dhaweynayaa fagaaraha maxkamadda ee Brownstown. Suuqa waxaa la qabtaa maalin kasta oo jimce ah 9 subaxnimo ilaa 1 galabnimo laga bilaabo Juun ilaa Oktoobar.
Suuqa Beeraha ee Crothersville
Wadada 101 West Howard
Soo-saar iyo alaab ayaa la soo dhaweynayaa. Suuqa waxaa laqabtaa Sabti kasta 9ka subaxnimo ilaa duhurkii. Wac 812-390-8217.
Soo Saarkii Wonning
5875 E. Co. Rd 875N., Seymour, Wax soosaarka waddada dhinaceeda.
Suuqa Beerta VanAntwerp
11181 N. US 31, Seymour, 812-521-9125, istaagga wax soo saarka wadada.
Suuqani wuxuu sidoo kale ka muuqdaa istaaga wadada dhinaceeda West Tipton Street.
Beerta Caanaha Lot Hill
Beerka caanaha ee qoysku leeyahay, sameynta noocyo kala duwan oo farmaajo ah oo ay ku jiraan farmaajo faafin oo ay weheliso caano iyo shukulaato cad. Gelato waxaa sidoo kale lagu heli karaa noocyo kala duwan oo dhadhan ah… dhammaantood lagu sameeyay caano laga helay keydkooda xoolaha lo'da. Alaabada waxaa lagu iibiyaa Suuqyada Beeraleyda maxalliga ah iyo dukaanka beeraha ku yaal guryahooda.
Beeraha iyo Bowers Farmstead
Beertan 1886 ee isku qoys-ka ah ayaa ka beddelaysa hawlgalkii caadiga ahaa ee dalagyada dalagga loo beddelay mashiin-wax-soo-saar dabiici-cufan oo dhan ah. Badeecadaha loo yaqaan 'Farmstead' ee la heli karo waxaa ka mid ah cawska la daaqay, hilibka lo'da ee cawsku ku dhammaaday, ukunta daaqda ah, burka qamadiga oo dhan iyo saloolka.
4160 Wadada Bariga Degmada 925N, Seymour
Aquapon waa aqalka dhirta lagu koriyo oo maxalli ah. Beertaan waxay siisaa cagaarka iyo tilapia dukaamada maxalliga ah, ganacsiyada, iyo macaamiisha.
Beeraha Rolling Hills Farve
4810 Wadada Bariga Degmada 925N, Seymour
Beertan waxay ku faantaa koritaanka tayada cajiibka ah iyo munstead lavender ee beerta qoyska ee Cortland, IN. Riyadii Lavender Trivia waxay bilaabatay 2018 oo hadda dhulkoodu wuxuu hoy u yahay in ka badan 2,000 oo dhir lavender ah. Sannadka 2020, xidhmooyin ayaa diyaar u noqon doona in la iibsado.
Khamriyeyaasha / Khamriga
The Chateau de Pique Winery iyo Khamriga
Chateau de Pique wuxuu leeyahay qol dhadhamin iyo aag soo dhaweyn ah oo ku yaal aqal qurux badan oo buuro ku yaal. Qolka dhadhamintu wuxuu bixiyaa dhadhamin khamri bilaash ah toddobo maalmood usbuucii. Saddex hektar oo canab ah oo cad iyo casaan leh ayaa ku yaal hantida iyo liiska khamriga waxay ku faantaa qiyaastii 25 nooc, oo ka bilaabma Riesling ilaa Semi-Sweets ilaa Sweet Ports. Ha iloobin inaad tijaabiso biirka Chateau de Pique marka xigta ee aad booqato! Chateau de Pique wuxuu kaloo gobolka ku leeyahay bakhaarro dayax gacmeed lagu diro.
Chateau de Pique wuxuu ku yaal 6361 North County Road 760 East, Seymour, 812-522-9296.
Khamriga Salt Creek
Salt Creek Winery wuxuu bilaabay 2010 inuu yahay hiwaayad reer Lee ah. Khamriga wuxuu ku yaalaa buuraha rogaya ee Koonfurta Indiana wuxuuna xuduud la leeyahay Hoosier National Forest. Oo ay weheliyaan khamri canab ah, Lee ayaa soo saaray khamriga buluugga ah, strawberries, cherries, baaraha, plomme iyo xitaa midab madow. The Salt Creek Winery wuxuu soo saaraa meherad, cabernet sauvignon, chambourcin, Riesling, qorrax dhaca casaanka, blackberry, caddaanka caadiga ah, blackberry duurjoogta ah, tubta, buluugga, cambe, miro guduud, kaneecada, casaan macaan, caddaan macaan, Catawba iyo casaan cas.
Salt Creek Winery wuxuu ku yaal 7603 West County Road 925 North ee Freetown. 812-497-0254.
Shirkadda Bixinta Seymour
Shirkadda Seymour Prewing Company waa Seymour shirkaddii ugu horreysay ee soo shaqeysa. Istaag oo iskuday shilimaan ama buuxi mirahaaga. Muusikada tooska ah ee loo qabto marba marka ka dambaysa qalabka wax lagu kariyo iyo, marka cimiladu fiican tahay, ku raaxayso heesaha ku dhegan Harmony Park. Jadwal buuxa oo farshaxanno ayaa soo muuqda inta lagu jiro xagaaga. Biirro kala duwan ayaa tubbada ku socda. Waxay ku taalaa Shirkadda Pizza ee Brooklyn.
Shirkadda Seymour brewing waxay ku taalaa 753 West Second Street, Seymour. 812-524-8888.
Kawaanka Gobolka Kalluunka ee Driftwood
Waxaa lagu dhisay Nidaamka Maamulka Mashaariicda Shaqada (WPA) dabayaaqadii 1930-meeyadii, xaruntan biyo diirran waxay ka kooban tahay 9 balli dhaqdo dhoobo ah iyo 1 balli kalluun lagu haysto. Balliyada barbaarinaya waxay u dhexeeyaan 0.6 ilaa 2.0 acres cabir ahaan waxayna bixiyaan wadar dhan 11.6 hektar oo kaluunka lagu dhaqo. Xaruntu waxay kordhisaa 250,000 oo laba inji ah, 20,000 afar-inji largemouth ah iyo 8,500 kanaal kalluun sanadkiiba, oo markaa loo isticmaalo in lagu keydiyo biyaha badan ee Indiana.
(waxaa bixiya Indiana DNR)
Deegaanka loo yaqaan 'Driftwood State Fish Hatchery' wuxuu ku yaal 4931 South County Road 250 West, Vallonia, 812-358-4110.
Xannaanada Vallonia, Qeybta Dhirta
Hadafka xanaanadu waa inuu kobciyo una qaybiyo agab tayo sare leh oo dhir ah oo loogu talagalay beero ilaalin ah milkiilayaasha Indiana. Afar milyan iyo badh geedo ayaa sannad kasta laga beeraa 60 nooc oo kala duwan. Xarunta 250 acre waxay soo saartaa cinjir iyo alwaax adag.
Xannaanada Vallonia, Qeybta Dhirta waxay ku taal 2782 West County Road 540 South ee Vallonia. 812-358-3621
Xannaanada Schneider, Inc.
Laga soo bilaabo carruurnimadiisii, George Schneider, wuxuu lahaa hal himilo – inuu koriyo geedo si kor loogu qaado quruxda deegaankiisa. George wuxuu bilaabay inuu ku beero geedo iyo geedo dhul yar oo uu ka amaahday waalidkiis 'digaag digaagga uguna soo saaro beer.
Dugsiga sare kadib, George wuxuu guursaday Mae Ellen Snyder. Isaga iyo xaaskiisa cusub waxay ka soo iibsadeen 24 hektar beerta qoyska waxayna aasaaseen xanaanad tafaariiqeed – Schneider Nursery.
Waqtigan xaadirka ah, xannaanadu waxay ka kooban tahay in ka badan 500 hektar oo dhul ah waana xannaanada ugu weyn Koonfurta Indiana. Schneider waxay ka iibisaa dhirta dhirta dhirta dhirta jumlada iyo tafaariiqda labadaba.
Schneider Nursery, Inc. wuxuu ku yaal 3066 East US 50, Seymour. 812.522.4068.